Benefits from yoga - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ယခုခတျေမှာ ကနျြးမာရေးကို လူကွီးလူငယျမရှေးလိုကျစားလာကွပွီဖွဈတဲ့အတှကျ အားကစားခနျးမ(Fitness Gymnasium)မြား နရောအတျောမြားမြားမှာပျေါလာပွီဖွဈပါတယျ။ ထို့အတူပဲ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ကုထုံးတဈခုဖွဈတဲ့ ယောဂကငျြ့စဉျ (Yoga)လကေ့ငျြ့ရေးခနျးမမြားလညျးရှိလာပါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ ယောဂကငျြ့ခွငျးရဲ့ကောငျးကြိုးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားနှငျ့အကွောမြား ပြော့ပွောငျးလာခွငျး
ယောဂကငျြ့ခွငျးအားဖွငျ့ တဈနကေုနျအညောငျးမိပွီးတောငျ့တငျးနတေဲ့ သငျ့ရဲ့ ကွှကျသားတှပြေော့ပွောငျးလာကာ ပငျပနျးမှုကိုပွလြေော့စမှောပဲဖွဈပါတယျ။
ယောဂကငျြ့စဉျတှဟော ကိုယျနဟေနျအနအေထားတဈခုမှာ ခန်ဓာကိုယျကို ကွံ့ကွံ့ခံရပျတညျနိုငျအောငျလဲအထောကျအကူပွုတဲ့အတှကျ ခန်ဓာသနျစှမျးကွံ့ခိုငျမှုအားကို တကျစပေါတယျ။
မိနဈသုံးဆယျခနျ့ယောဂကငျြ့ခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျပျေါမူတညျပွီး ၁၂၀ကယျလိုရီမှ ကယျလိုရီ၂၀၀ အထိကဆြငျးစနေိုငျတာကွောငျ့ အဆီပိုတှကေိုဖယျရှားပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကနြမှုကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။
ယောဂကငျြ့သူတှဟော အာရုံကိုစူးစိုကျထားပွီး လကေ့ငျြ့ရတဲ့အတှကျ စိတျကိုပိုမိုတညျငွိမျစပွေီး စိတျဖိစီးမှုကိုလြော့ကစြပေါတယျ။
ယောဂကငျြ့ခွငျးဟာ သှေးပေါငျခြိနျကိုထိနျးညှိပေးပွီး နှလုံးခုနျနှုနျးကို ဖွေးဖွေးနဲ့မှနျမှနျခုနျစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သှေးတိုးနဲ့နှလုံးရောဂါအစပြိုးနသေူမြားအတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျး ရောဂါကာကှယျနိုငျမယျ့နညျးလမျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ယောဂကျင့်ထုံး (Yoga)ရဲ့ ကောင်းကျိုးအသွယ်သွယ်
ယခုခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးကို လူကြီးလူငယ်မရွေးလိုက်စားလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားကစားခန်းမ(Fitness Gymnasium)များ နေရာအတော်များများမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ် (Yoga)လေ့ကျင့်ရေးခန်းမများလည်းရှိလာပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ယောဂကျင့်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားနှင့်အကြောများ ပျော့ပြောင်းလာခြင်း
ယောဂကျင့်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နေကုန်အညောင်းမိပြီးတောင့်တင်းနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကြွက်သားတွေပျော့ပြောင်းလာကာ ပင်ပန်းမှုကိုပြေလျော့စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယောဂကျင့်စဉ်တွေဟာ ကိုယ်နေဟန်အနေအထားတစ်ခုမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်အောင်လဲအထောက်အကူပြုတဲ့အတွက် ခန္ဓာသန်စွမ်းကြံ့ခိုင်မှုအားကို တက်စေပါတယ်။
မိနစ်သုံးဆယ်ခန့်ယောဂကျင့်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ၁၂၀ကယ်လိုရီမှ ကယ်လိုရီ၂၀၀ အထိကျဆင်းစေနိုင်တာကြောင့် အဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျနမှုကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ယောဂကျင့်သူတွေဟာ အာရုံကိုစူးစိုက်ထားပြီး လေ့ကျင့်ရတဲ့အတွက် စိတ်ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
ယောဂကျင့်ခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်ခုန်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးတိုးနဲ့နှလုံးရောဂါအစပျိုးနေသူများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ရောဂါကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။